नेपालको निजामती सेवा | Arjun Bhandari Free songs
Home / विषयगत लेख / नेपालको निजामती सेवा
Posted by: Arjun Bhandari in विषयगत लेख July 31, 2014	2 Comments 5407 Views
परम्परागत प्रशासनवाट ग्रसित नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन तर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । यस तर्फ सवैंले पहल कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन संचालनको महत्वपुर्ण अवयव निजामती सेवाको वर्तमान त्चभलम सन्दर्भमा भन्दा विद्यमान परम्परागत संरचना र संस्कारले गर्दा अग्रगामी छलाड. मार्न नसेकेको तितो सत्य पनि हामी माझ नभएको होईन । पुरानो शैली तथा कार्यगत संरचनाले गर्दा नयाँ जोश जाँगर भएका नविन व्यक्तित्वहरुको कार्यशैली पनि आझेलमा पुगेको महसुस नभएको होईन । प्रशासनका हरेक निर्णय निर्माण प्रकृयाहरुमा पनि समान सहभागिताका साथै पारदर्शिताको अभाव रहेको पाईन्छ । अझै New Technology लाई समावेश गर्न सकिईरहेको देखिदैन् । Quality Circle, Flexi Time, Open Office Space System जस्ता सिद्धान्तहरु लागु गर्न सकिईरहेको छैन् ।
यस्ता र यी कुराहरु लागु गर्न तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वप्रथम कर्मचारीहरुको वानी वेहोरामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको म देख्तछु । कम्प्युटर नजान्ने कर्मचारीहरु तथा पुरानो वानी, कार्यमा रमाउन चाहने कर्मचारीको लागि सुधार गर्न फलदायी देख्तैनन् । निजामती सेवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हो । यस अर्थमा निजामती कर्मचारीहरु आफुलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन गर्न सदा जागरुक, प्रतिवद्ध र उत्प्रेरित हुनुपर्दछ । यसको लागि कर्मचारीहरुको सदा मनोवल उच्च राख्नु जरुरी रहेको छ । तर वर्तमान समयमा विगत लामो समय देखिको परम्परा, हाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता, प्रशासनिक संस्कारका कारण निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आफुलाई सुम्पिएको कार्यप्रति खासै उत्प्रेरित हुन सकिईरहेको छैन् । प्रशासनभित्र भित्रिएको विसंगतीले अधिकांश कर्मचारीको मनोवलमा दिन प्रतिदिन हस आईरहेको छ । न्युनतम तलवभत्ता, वृत्ति विकासमा न्युन सम्भावना, सरुवा आतंक, कर्मचारीहरुको अवमुल्यन, जस्ता विविध तत्वहरुको कारणले गर्दा नेपालमा निजामती कर्मचारीको मनोवलमा कमी हुन आईरहेको छ । म्याक्स वेवरको Bureaucracy को जति आलोचना गरिएपनि यो भन्दा अरु सिद्धान्तहरु आउन सकेका छैनन । आदर्श कर्मचारीतन्त्र नै आजको युगको माग हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अवस्था वारेमा हेर्दा ईतिहास र र्वतमानवाट पनि प्रष्ट हुन्छ । परम्परागत प्रशासनवाट ग्रसित कर्मचारीतन्त्रलाई सवल र सक्षम मानिएतापनि नेपालको सन्दर्भमा यो आदर्श हुन नसकिरहेको देखिन्छ । मुल आदर्शवाट विमुख नेपालको सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनमा Bureaumenia, Bureauropathology, Catch तथा Red Tapism जस्ता रोगहरुवाट ग्रसित रहेको पाईन्छ ।
आर्दश कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीका व्यवहार र सोच आधुनिक शैलीका रुपान्तरित प्रकृतिका हुन्छन । मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने , कर्मचारीहरुमा पनि वर्ग विभेद गर्न हुदैन । समाज रुपान्तरण गर्ने सोचका कर्मचारीहरुमा वर्गिय संरचनाले गर्दा आत्मग्लानीको भाव पैदा हुन्छ । मुख्यतः नेपालको कर्मचारी प्रशासनको स्वरुप Western Model आधारित रहेको छ । वेलायत, वा भारतको पुरै नक्कल रहेको कर्मचारीको Classification Structure मा कतिपय झन्झटिला अवस्थाका साथै नमिलेको संरचना रहेको छ । पिरामिड आकारको संरचना र विविध वर्ग छुट्टिएको अवस्थाले गर्दा नमिलेको छ ।
अधिकृतमुलक कर्मचारी प्रशासन आजको आवश्यकता हो । कार्यालयको संरचना Open Office System अनुरुप CCTV Camera, Interconnection जडान जस्ता आधुनिक संयन्त्र मार्फत Chain Of Command राख्न पनि सजिलो हुन्छ । Information Technology युक्त प्रशासन आजको आवश्यकता पक्कै हो । सवैं कर्मचारीमा कम्प्युटर प्रणाली सम्वन्धी जानकारी हुने र कार्यालयका कार्यहरु सवैं कम्प्युटर प्रविधीवाट गर्ने र जसको Desk मा काम आउछ सोही Desk वाट कार्य सम्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो भने पनि नेपालको निजामती प्रशासनमा नयाँ आयाम थपिन सक्छ । तर ठ्याक्कै उल्टो आजको प्रशासनिक कार्यशैली सवैं कागजी रहेको छ । कम्प्युटरमा हाम्रो निजामती प्रशासनका कर्मचारी तथा संगठन अतिगरिव सुषुप्त अवस्थामा रहेको छ ।
लोकतन्त्रको पुर्नवहाली संगै संघीयताको माग चर्कोसंग उठेको छ । पक्कै यो राम्रो कुरा हो यस मानेमा कि संघीय शासन व्यवस्थाको माग उठ्नुको अर्थ जनसमुदायहरु छिटो छरितो र पारदर्शीर्पुवक सेवाको अपेक्षा गरेका छन् भन्ने हो । राज्यको पुर्नसंरचना जति कठिन छ त्यती नै प्रशासनिक पुर्नसंरचना नै हो । तसर्थ यसको वुद्धिमतापुर्वक हुनु जरुरी रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताको भावना अनुसारको सेवा प्रवाह सरल तथा सेवाग्राही प्रतिको उत्तरदायीत्व भएर छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । उच्च नैतिक वलयुक्त प्रशासन नै आजको आवश्यकता हो । सो को लागि प्रशासनको अग्रगामी रुपान्तरणका साथै कर्मचारीपनि समयानुसार रुपान्तरण हुनु आवश्यक रहेको छ ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको मुल मर्म र मान्यता अनुरुपको नयाँ कर्मचारीतन्त्रयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सेवाग्राहीलाई दिईने सेवा तथा सोच र कार्यशैली तथा व्यवहार नयाँ मर्म अनुसारको हुनु आवश्यक छ । त्यसको लागि नेपालको निजामति सेवामा निम्न व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्थापन लागु गर्न सकिन्छ ।
शाखा अधिकृत भन्दा तलतिरका पदहरु सवैं करारद्धारा भर्ना गरिनुपर्छ । एउटा कर्मचारी टिफिन, वोटलमा पानी वोकी कार्यालयमा आउन र आफै चिया पकाई खान सक्छ ।
१० देखि ४ वा ५ वजाउने हाम्रो निती परिवर्तन गर्नू आवश्यक छ । यसको लागि सर्वप्रथम कर्मचारीतन्त्रलाई Reform गरिनु आवश्यक छ । सो को लागि Flexi Time को अवधारणालाई प्रवेश गराउनुपर्दछ ।Flexi Time भनेको कार्यालयहरु हालको १० देखि ५ वजे सम्म खुल्ने र शनिवार पनि विदा हुने परम्परा हट्छ । विहान ५ वजे देखि साँझ ८ वा ९ वजे सम्म कार्यालयहरु खुल्ने तर कर्मचारीहरु डिउटी Join गर्ने । जस्तो विहान ५ वजे आउने कर्मचारी दिउसो १२ वजे घर जान्छ । यसमा दिनमा ८ घण्टा अनिवार्य काम गर्नूपर्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ । अर्को डिउटी पर्ने कर्मचारी दिउसो १२ वजे Join गरि साँझ ७ वजे सम्म काम गर्दछ । यस्तो गर्दा सवैंमा एकै टाईममा कार्य गर्ने ईच्छा पनि हुन सक्छ यसको लागि सेवाग्राही वढी आउने समयमा अनिवार्य काम गर्ने व्यवस्था गराउन सकिन्छ ।
अनावश्यक कर्मचारीहरु कटौती गर्ने र वाकी सवैं कर्मचारीहरुलाई कम्प्युटर अनिवार्य गर्ने ।
शाखा अधिकृत भन्दा तलतिरका पदहरुमा करारमा लिने नियम वनाई पद विज्ञापन नै नगर्ने ।
सवैं कार्यालयहरुमा Open Office Space System वनाउने । यो भनेको सवैं कर्मचारीहरुलाई Supervising गर्ने तथा Chain Of Command मा राख्ने १ जना एक तह माथीको पद र अर्को सहायक स्तरको पद राखि वाकी सवैंलाई एउटै समान पद मान्नुपर्ने । जस्तो उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरुमा उपसचिव र एक जना वरिष्ठ शाखा अधिकृत (तह वनाउन सकिन्छ) लाई सहायकको जिम्मेवारी तोक्ने । वाकी सवै जना शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारी फाँट अनुसार हुने व्यवस्था मिलाउने । अन्य आवश्यकता अनुसार कार्यालय सहयोगीहरु करारमा राख्ने । अनि कार्यालयको व्यवस्थापन छुट्टाछुटटै फाँटको आवश्यकतै रहदैन ।
अनि मात्र व्यववस्थापन भित्र छिर्नुपर्दछ । यसको लागि कर्मचारीको पद वर्गिकरण योजना, कार्यगत सवैं कामहरु टिप्पणी प्रथा लगायत कम्प्युटरवाट गर्ने व्यवस्था, CCTV जडान, लगायत कर्मचारीको वृत्तिविकास योजना जस्ता विविध पक्षहरुलाई अगांल्न सकिन्छ । सो को कार्यान्वयनवाट सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुन्छ र कार्यसम्पादन र सांगठनिक लक्ष्य र उद्धृेश्यहरु प्राप्त भई गुणस्तरीयता, र प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ । यसवाट कर्मचारीहरुमा मनोवल वढ्न जान्छ ।
नेपालको प्रशासन सेवालाई चुस्त र दुरुस्त वनाउनको लागि राजनीति र प्रशासनको सीमारेखा स्पष्ट पारिनुपर्दछ । जस्तो राजनीतिको कार्य नीति निर्माण गर्नु हो भने प्रशासनको कार्य ती नीतिहरुको सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो । राज्य तथा सरकारको सफलता तथा असफलताको प्रतिक कर्मचारी नै हुन्छन् । प्रशासनमा जवसम्म अवैध राजनितिक हस्तक्षेपहरु हुन्छन तव सम्म चुस्त र दुरुस्त प्रशासनको परिकल्पना गर्न सकिदैन । साथै प्रशासनमा One Door Service Policy तथा Portfolio Mgmt. system, , क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक उतरदायित्व प्रणालीको स्थापना, कर्मचारीहरुलाई सामाजिक व्यवहार धान्न सक्ने तलवभत्ता, सहभागितामुलक व्यवस्थापन प्रणालीवाट निर्णय प्रकृयामा सरलीकरण र सवैंको समान सहभागितापुर्ण प्रशासन लागु गर्न सके पक्कै नेपालको निजामती सेवामा नयाँ आयामको शुरुवात हुनसक्थ्यो । तर प्रत्येक नयाँ आउने सरकारले सधै आफुलाई परिक्षण अवधीमै छौं, संक्रमणकालमा छौं, भन्ने अभिव्यक्ति दिने र कर्मचारीहरुको समस्यालाई सम्वोधन नगर्ने हो भने कदापी नयाँ प्रशासन, जनताको प्रशासनको लक्ष्यको गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुनै सम्भावना देखिदैन ।
Previous: बिगतका सम्झनाहरु
Next: How to Prepare for Loksewa Interview ?
Punya Pd Bhattarai
Hy bro!anew commencement, I really appreciate for such innovation. N, really glad to visiting your genus personal web page. Go ahead.
Thank you very much. I will do try my best. your suggestions will be most valuable.
LeaveaReply to Punya Pd Bhattarai Cancel reply